Companlọ ọrụ ndị ọzọ na-eji teknụzụ nyochaa ndị ọrụ - OMG Solutions
International Data Corp (IDC) mere nyocha na ebe ọrụ ma kọwaa na 30 ruo 40 pasent nke ịntanetị ịnweta ọrụ enweghị ihe metụtara ọrụ. Ndekọ ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ na-egosi na 21 na 31 pasent nke ndị ọrụ zitere ozi ịntanetị na-ekpughe ozi dị omimi dịka nzuzo nzuzo, ihe ọgụgụ isi, na mpụga nke ụlọ ọrụ mmekọrịta; 60% nke ịzụ ahịa n'ịntanetị ka a na-eme n'oge awa ọrụ. Na United States of America, a na-emefu kwa afọ na mmeputa site na ịre ahịa gold n'ịntanetị na 40%.
Vezọ nlere anya gụnyere igwefoto zoro ezo, Ndekọ Onyonyo, Ndepụta GPS, Ndekọ Njem Keystroke, Wiretapping, na Ntanetị ntanetị nke na-agụnye nlekota nke mkpokọta weebụsaịtị nke ndị ọrụ, ozi ngwa ngwa, email, na mmekọrịta na saịtị ntanetị Social.
Otu ihe dị mkpa maka nyocha nke ndị ọrụ site na teknụzụ kachasị ọhụrụ bụ igbochi ha iji ụdị akụrụngwa ha. Ọ bụ ihe iwu kwadoro ka ndị were ọrụ were iji ekwentị, kọmputa, na kọmputa ndị ọzọ nwe ọrụ n'oge ọrụ. Okwu banyere iwu bụ ihe na-emenye ụjọ mgbe ndị ahịa azụmaahịa hụrụ ndị ọrụ na-eji ụdị akụrụngwa nwere ụlọ ọrụ na-abụghị oge ọrụ ma ọ bụ jiri ngwaọrụ nke aka ha n'oge ọrụ.
Tupu ị debe usoro ọrụ nlekọta onye ọrụ, ịkwesịrị ịkọwapụta usoro nke nnweta ụlọ ọrụ dị mma ma nabataghị n'oge oge ọrụ ma wulite Iwu Nzuzo Nke A Pụrụ thatnweta AUP nke ndị ọrụ ga-ekwenye na ya. Anyị nwere ngwaọrụ klaasị ụwa maka ileba anya ndị ọrụ. Maka nkọwa ndị ọzọ pịa ebe a.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-eji teknụzụ arụ ọrụ iji nyochaa ndị ọrụ:
Igwefoto zoro ezo, ndị na-egwu GPS, na Ndekọ olu bụ ngwaọrụ ndị na-egosi na oge ọhụụ nke ọrụ ọrụ ejikọtara, mana ụfọdụ ndị ọkachamara kwuru na teknụzụ ndị a na-etinyekwa nzuzo nzuzo nke ndị ọrụ.
Iji maa atụ, akwụkwọ gọọmentị ọhụrụ gosipụtara site n'aka nnukwu teknụzụ Amazon gosipụtara ese foto dị iche iche zoro ezo, ihe ndekọ olu na ihe nlere GPS nke nwere ike ilele ọrụ ndị ọrụ. Otu ụlọ ọrụ teknụzụ na-eduga na Wisconsin atọ Square Market bidoro usoro igwefoto zoro ezo maka ndị ọrụ ya na July 2017. Ndi UPS nwechara onwe ya na gwongworo ndi mmadu iji wee na-emechi ma na-emechi emechi, injin nke ugbo ala ya, ma achiri eriri oche.
Sam Bengston, onye injinia ihe ngwanrọ na Market ato, kwuru na ya jiri obi ya niile chọọ itinye ya na microchip.
Ọ tụtụdịghị uche na ya agaghị eme ya; ọ gara n'ihu kwuo na ya jiri mgbawa swipe banye n'ime ụlọ echedoro ma banye na kọmputa ya. Ọ bụ ahụmahụ kwesịrị ekwesị ma sie ike. Ngbanwe ohuru a nwere ike imebi uzo di n'etiti ihe egwu na mmeputa ka nma.
Maazị Daniel Ives nke na-enyocha ụlọ ọrụ teknụzụ sitere na GBH Insight na-ekwu na n'ofe ụlọ ọrụ, n'ofe ụwa, ndị were ọrụ na-achọ inweta ndị ọrụ ga-ejikọ ibe ha. Nnukwu ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na-achọ ụzọ iji nye ndị ọrụ ọrụ aka elu na nghọta data banyere arụmọrụ ha na ndị ọrụ.
Mana nghọta ndị ahụ nwere ike ịbịa mgbe ọ mebisịrị nzuzo nke ndị ọrụ.
Ives gara n'ihu na-ekwu na site na onye na-arụ ọrụ na echiche data onwe ya, ozi ahụ dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na ozi ahụ abanye n'aka adịghị mma, ọ nweghị ihe dị iche na nnukwu mmebi iwu.
Paula Branter bụ onye ndụmọdụ gbara ọkpụrụkpụ na Fairlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọrụ, ụlọ ọrụ ọha na-abaghị uru na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịkwado ikike ndị ọrụ kwuru, sị, "Ndị mmadụ anaghị aghọta na enweghị ọtụtụ iwu na-echekwa nzuzo na ebe ọrụ. Akụkụ nke nchegbu a bụ na ndị otu na-arụ ọrụ nwere ike ghara ịmụrụ anya etu esi enyocha data niile yana otu esi eji ya.
Companieslọ ọrụ na-echekwa ndị ọrụ ha ka ha lezie anya ka ha na-ekpebi arụmọrụ ha ma bulie arụmọrụ nke ụlọ ọrụ ha mgbe ha nwesịrị data niile gbasara ọrụ ndị ọrụ. Teknụzụ ọgbara ọhụrụ na-enye ndị nwe ụlọ ọrụ na azụmaahịa ihe ga-agafe elekere elekere elekere / elekere anya nke afọ.
CBS na-akọ na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enyocha ndị ọrụ site na ngwa dị na ekwentị ha, igwefoto zoro ezo, Olu Ndekọ, Ndepụta GPS. Mgbe ha si ebe ahụ pụọ, ha nwere ike ịmata ebe ha nọ. TV ahụ gara n'ihu na-akọ na ụfọdụ ụlọ ọrụ na-enyochakarị saịtị niile ndị ọrụ na-eleta na ihe nchọgharị ha, mgbanye ọ bụla ha tinyere ka ha na-ede ya.
Ọtụtụ mgbe, ndị njikwa na-eji teknụzụ ekpe ikpe maka nrụpụta ọrụ ndị ọrụ, na-enyere ndị ọrụ aka ilekwasị anya ma tụọ otu ha si etinye oge ha na elekere. Ọtụtụ ndị ọrụ na-egbu oge n'ọtụtụ ụzọ ndị ọrụ dị otú a nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-abịaghị n'oge, na-ahapụ n'oge ma ọ bụ na-egwu bọọlụ fantasy ma ọ bụ egwuregwu kọmputa ndị ọzọ na kọmputa ha ụbọchị niile kama ị givinga ntị na ọrụ ha. Yabụ, teknụzụ ọhụụ bụ azịza kachasị mma maka ndị were gị n'ọrụ iji nyochaa ọrụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ndị ọzọ.
Ngwaahịa anyị na-ahụ maka nchekwa dị mma nke ukwuu na-enyocha ọrụ nke ndị ọrụ. Biko gaa na ebe nrụọrụ weebụ anyị maka ngwaọrụ onyunyo anyị.
Otu onye ọrụ California weghaara igwefoto zoro ezo na ọ na-emejọ PC nke ụlọ ọrụ ahụ ma na-egbu oge nzukọ a na-egwu egwuregwu n'ọfịs. Enwere ike ịhụ ihe omume ndị a site na iji teknụzụ ọhụụ.
Enwere ọtụtụ adịghị mma na adịghị mma nke iji ihe ndị dị otú ahụ. Ezigbo ihe ndọghachi azụ na ihe m chere na anyị echebara echiche bụ ihe na-agbanwe na akụ na ụba America bụ igwe na ígwè ọrụ na-ewepụ ọrụ. Ihe ụmụ mmadụ nwere ike ime kacha mma bụ iche echiche nke ọma, chee echiche na mpụga igbe, chee na igwe igwe enweghị ike iche, chee ihe igwe mmadụ enweghị ike iche. Na ime nke ahụ ịchọrọ nnwere onwe, ịchọrọ ụfọdụ mgbanwe.
CBS gara n'ihu na-akọ na Isiokwu New York Times nke na-adịbeghị anya na-enyocha ebe ọrụ na usoro nchịkwa Amazon dị ka ihe atụ nke otú nlebara anya ndị ọrụ nwere ike isi mee omume mmụọ. Channellọ ọrụ telivishọn na-egosi akụkụ ọzọ na-adịghị mma nke ileba anya ndị ọrụ na-etinye, ebe eji ọtụtụ teknụzụ onyunyo kachasị ọhụrụ, nwere ike ibute obi ụtọ yabụ ndị njikwa nwere ike ịmaghị nke a. Companieslọ ọrụ ndị ọzọ dị ka Netflix na Google na-achụ ụlọ akwụkwọ nke izu ike. Netflix na-enye ezumike mgbe ọ bụla ịchọrọ mgbe Google nwere nnukwu izu ike gbasara otu esi etinye oge gị; Ha na-agba ume ịrọ nrọ ụbọchị.
Otu igwefoto zoro ezo, ihe ndekọ olu, na GPS Ndepụta ọrụ:
Igwefoto zoro ezo na-akwado site na batrị; ọtụtụ n'ezie na-achọ ịbanye na mgbidi na-enweghị njikọ ma ọ bụ na-agbakwunye na sistemụ eletrik. Ha na-eji nkwukọrịta ikuku na-adịghị, agbanyeghị, nke a pụtara na ịkwesighi iji eriri igwefoto gaa igwefoto na-anabata ya. Nke a nwere ike ime ka ha dịkwuo mma iji ma dịkwa mfe izo.
Igwe na - agbadata ụda olu dị elu dijitalụ na-abịa n'ụdị abụọ; Onye na-edekọ ihe raara onwe ya nye mere nke ịchọrọ ka ịdekọ olu na ụda ndị ọzọ ma ọ bụ ngwa arụnyere na ekwentị. Agbanyeghị, na ịdabere na akụrụngwa ụda gị dị, ị nwekwara ike ijikwa olu site n'ọtụtụ ọdịyo ndị ọzọ na ngwaọrụ ndekọ.
Enwere netwọ ụwa zuru ụwa ọnụ, nke Satellites 30 na ogo 20,000 kilomita site na nkwado ya, nke a na-akpọ Sistem Ọnọdụ Ọnọdụ (GPS). N'oge gara aga, e mere ya nke ọma maka ndị agha United States of America mana ugbu a, onye ọ bụla nwere ike irite uru na ya. Ngalaba GPS ejiri aka ma ọ bụ ekwentị ekwentị nwere ike ịnakọta akara redio nke satellites na-agbasa.
Otu ụlọ ọrụ si enyocha ndị ọrụ:
Ndị na-ewe mmadụ n'ọrụ nwere ike ịtọlite ​​kamera vidiyo iji gụọ email, na akwụkwọ ozi nzipu ozi wee hụ ojiji kọmputa na ekwentị. Ndị ụlọ ọrụ na-eji GPS Tracking iji nyochaa ndị ọrụ ha n'ebe ọrụ ha.
Ebe ọrụ juputara n'ihe atụ nke na-edozi ụzọ ụfọdụ esi arụ ọrụ gị ka ọsụsọ. Dị ka ndị ọrụ ahịrị na-arụ ọrụ, ndị manyere ịrụ ọrụ n'otu oge ọsọ ọsọ ma kpọọ ụlọ ọrụ na-achọpụta ogologo oge na ekwentị. Ndị were gị n'ọrụ na ndị isi nke ụlọ ọrụ na azụmaahịa na-enwetakwa ozi email na kọmputa.
Nnukwu ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na-etinye akwụkwọ maka ikike izizi ihe na-enweghị atụ, ọ bụ ihe a na-agaghị emeli ọhụụ.
Ndị ọrụ nabatara Nkà na ụzụ:
Acceptnabata mwakpo nzuzo abanyela akụkụ nke ọrụ. Ndị mmadụ na-anakwere ụdị omume a dịka ihe ha ga-eme ka ha wee na-arụ ọrụ. N’uzo ozo, nke a furu efu n’agha dika ufodu ndi okacha mara. Paula Branter bụ onye ndụmọdụ dị elu na Ọrụ Achọghị Ọrụ kwuru na a na-achịkọta data gbasara ọrụ ndị mmadụ ma chekwaa ya n'ọnọdụ amaghị ama. N'ụfọdụ, ndị ọrụ kpebiri ka a hụ ha.
Karịa 45 nke ndị ọrụ atọ Square Market 80 kwetara ịnwe GPS Tracker. Onye isi ụlọ ọrụ ahụ, Todd Westby kwuru na site na ọganihu nke Global Positioning System Technology, ndị were ọrụ nwere ohere pụrụ iche na ọnọdụ ndị ọrụ ha. Ruo ọtụtụ afọ, ọtụtụ ụlọ ọrụ dị na United States America enweela ike iji ekwentị ma ọ bụ ndị ọrụ ubi 'ebe ha na-eji ngwaọrụ GPS n'ime ụgbọ ala. Site na iji teknụzụ ọhụụ na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ nwere ike soro ebe ụzọ Global Positioning System ngwa dị na smart-smart Company Companyes. Ma nsuso na-egosi ihe egwu ndị were ọrụ kwesịrị ịghọta ka ha nwee ike ịkọwa ma uru ọdịghị oge a ga - ewepu ihe egwu dị egwu. Ndepụta ọnọdụ ndị ọrụ na ihe omume site na iji ọkwa ụwa nwere ike inwe ọtụtụ uru maka ụlọ ọrụ. Maka inweta uru nke teknụzụ kachasị ọhụrụ maka ịbawanye uru na azụmaahịa gị ị nwere ike ịchekwa ngwaahịa anyị dị mma. Gaa na weebụsaịtị anyị ma hụ nkọwa nke ngwaahịa anyị dị mma.
Ndị ụlọ ọrụ na-ewere Uru ndị a site na Nyochaa:
Onyunyo nke ndị ọrụ na-ada ka a ga-asị na nzukọ enweghị ntụkwasị obi na ndị ọrụ ya. Agbanyeghị, ọtụtụ uru na-abịa site na ịtọlite ​​ngwa onyunyo na azụmaahịa gị. Fọdụ uru ndị a abụghị uru ụlọ ọrụ bara uru kama ha bụ uru ndị ọrụ ahụ n'onwe ha. Onye isi ụlọ ọrụ enweghị ike ịlele ndị ọrụ ya oge niile. Ebumnuche n'azụ ndị ọrụ nlekota oru bụ ka ndị were ha n'ọrụ mara ihe na-eme na azụmaahịa gị na enweghị gị.
Mgbe ụlọ ọrụ nyochara ndị ọrụ gị n'oge ọrụ ha, ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ijide mmejọ ma ọ bụ njehie nwere ike ime n'ebe ọrụ ụbọchị. Mgbe ọ bụla ịhọtara onye ọrụ na-emehie, ị nwere ohere ịbịakwute ya ngwa ngwa, chọpụta mmejọ ya, ma manye ya ka o mezie ihe ahụ. N’aka nke ozo, inwere ike ihu ihe omuma a ma gosi ya n’ihu onye oru ozo n’oge nyocha.
Companieslọ ọrụ dị iche iche na-agbaso teknụzụ iji nyochaa ndị ọrụ iji meziwanye mmekọrịta ndị ọrụ na ndị ọrụ. Nwere ike rịba ama njehie nke ndị ọrụ kama ịkọwapụta ozugbo, ị nwere ike isoro ha kparịta ụka mgbe oge ruru. Omume nke ijide onye ọrụ na-ezighi ezi nwere ike ime ka ụjọ na enweghị atụ na onye ọrụ were ahụ iru ala na ụjọ maka imejọ ihe. Nke a nwere ike belata arụpụta nke onye ọrụ.
Ndị ọrụ afọ ofufo ma ọ bụ na-enweghị ụfụ nwere ike mebie iwu nchekwa nke nwere ike imerụ ha ahụ ma merụọ ezigbo ahụ. Site n’inwe usoro nlekọta, onye isi nwere ike ileba anya n’ihe ọ bụla gbasara nchekwa ọ bụla, tinyere obere ihe egwu dị na ala ma ọ bụ n’elu, ọkachasị maka ebumnuche ndị ọrụ na-etinyekarị n’ihe ize ndụ nchekwa, dị ka ụlọ nkwakọba ihe na ebe a na-ewu ụlọ.
Nwere ike tinye akara nke ndị ọrụ nke mmebi ụlọ ọrụ. A ga-enwe ndị ọrụ aghụghọ aghụghọ mgbe niile - ọ bụrụ na ị nwere nnukwu ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ndị ọrụ. N’ihe atụ a, ịchọrọ inwe ike ijide ndị ọrụ a bụ ndị na-ekwenyekarị na-ezighi ezi na ha karịrị usoro iwu ahụ. Chọrọ ijide ha na imebi iwu nke ụlọ ọrụ na enweghị nchịkwa. Site n’ileba anya na ha, ị ga - enwe ike ijide ndị mere ihe a ma were ha ozugbo ịme ihe.
Uru ọzọ na - ewetara ụlọ ọrụ iji teknụzụ ọhụụ maka ileba anya bụ mmụba na ọnụego mmepụta. Anzọ onye ọrụ na-etinye oge ya n'ọfịs na-enwe mmetụta dị ukwuu na ngwaahịa ụlọ ọrụ gị n'ozuzu ya. Site na nlebara anya ndị ọrụ, ị nwere ike ịhụ ihe ha na-eme na oge ha, nke na - enyere gị aka ịrụpụta ụzọ ị ga - esi mee ka ndị otu gị - na ọfịs n'ozuzu ya - na - arụpụta ọrụ. Maka ngwaahịa onyunyo gaa na webụsaịtị anyị.
Nzuzo 7117 1 Echiche Taa